Semalt: WordPress स्पाम बट्स कसरी रोक्ने? - एक सुपर गाइड
स्प्याम बट्स एकदम जिद्दी हुन सक्छ जब तपाइँको वेबसाइटको लागि उपयोगी तथ्या .्कहरू सिर्जना गर्न आउँदछ। उनीहरूले तपाईको एनालिटिक्स जानकारी स्काउ गर्छन्, गलत डेटा ल्याउँदछ साथ साथै तपाईको टिप्पणी सेक्सनमा धेरै स्पाम लिंकहरू छोड्दछ। भाग्यवस , फ्रेंक Abagnale, Semalt का अग्रणी विशेषज्ञ, तपाइँको WordPress वेबसाइटबाट WordPress स्पाम कसरी हटाउने भनेर जान्दछन्।
स्प्यामबॉट्स द्वेषपूर्ण प्रोग्रामहरू हुन् जुन असंख्य इन्टरनेट जालसाजी गर्नको लागि बनाइएको हो। यी प्रोग्रामहरूले अन्य प्रयोगकर्ताहरूमा स्पाम ईमेलहरूको माध्यमबाट तिनीहरूको उपकरणहरू फैलाउन ईमेल सूचिहरू सिर्जना गर्न खोज्दछन्। एक चोटि उनीहरूलाई क्लिक गर्न एक शिकार छल, प्रयोगकर्ता कम्प्युटर आक्रमणकारीको आदेश अन्तर्गत कार्य गर्दछ। स्प्याम बट्सले नक्कली प्रयोगकर्ता खाताहरूको लागि दर्ता गर्ने प्रयास गर्दछ, तपाईको एनालिटिक्स डाटा बिगार्नका साथै ग्राहक जानकारी चोर्न पनि। यी बट्सहरू हटाउन आवश्यक छ।
किन तपाईं वर्डप्रेस स्प्याम बट्स हटाउनु पर्छ
व्यक्ति जो वेबसाइटहरू विकास गर्छन् एकै पटकमा डिजिटल मार्केटिंग आवश्यक छ। कार्यान्वयनमा स्प्याम बट्सको साथ, डिजिटल मार्केटिंग प्रयासहरू सम्भव छैन। व्यक्तिहरू स्प्याम बट्सको प्रभावका सम्बन्धमा असंख्य मुद्दाहरूको पीडित छन्। उदाहरण को लागी, स्प्याम बटहरु तपाइँको वेबसाइट डेटा तिर झल्काउँछ जैसे गलत जानकारी को लागी नेतृत्व:
उच्च बाउन्स दर
धेरै साईटहरूबाट रेफरल ट्राफिक
० सेकेन्डको सत्र अवधि
नक्कली डेमोग्राफिक डेटा
फोनी पृष्ठ भ्रमणहरू
परिणाम स्वरूप, भविष्य मार्केटिंग योजनाहरू कार्यान्वयन हुन सक्दैन। यसका साथै एसईओ जस्ता अन्य डिजिटल योजनाहरू नराम्रो रूपमा प्रभावित छन्। उदाहरण को लागी, नक्कली वेब भ्रमण एक रैंकिंग विफलता को लागी। तपाईंको सामग्री प्रासंगिकता ड्रप हुन्छ किनकि अन्य क्रमबद्ध कारकहरू विफल हुन जारी छन्।
स्प्यामबट्सले तपाईंको वेबसाइटको टिप्पणी सेक्सनमा असंख्य स्पाम लिंकहरू पनि ल्याउन सक्छ। तपाईंको प्रयोगकर्ताहरू उनीहरूको फिसि attacks आक्रमणको लागि पर्न सक्छ। तिनीहरू मुद्दाहरूमा द्रुत प्रतिक्रिया गर्दछन् जसले प्रयोगकर्तालाई सोच्न लगाउँछ कि यी वैध प्रयोगकर्ताहरू हुन्। फलस्वरूप, ती तिनीहरूको डोमेनहरूमा ट्राफिक ड्राइभ गर्न सक्दछ त्यसैले तपाईंको श्रेणीलाई असर गर्दछ।
कसरी वर्डप्रेस स्प्यामबट्स रोक्न
यी वेबसाइटहरूमा पहुँच गर्नबाट यी बट्सलाई रोक्न सजिलो छ। केहि सेटिंग्स को आवेदन को माध्यम बाट, तपाई पर्याप्त सुरक्षा उपायहरु लाई लागू गर्न को लागी सक्षम हुन सक्नुहुन्छ केवल मानवीय आगन्तुकहरु को लागी तपाइँको साइट मा आउँछ। केहि प्लगइनहरूले स्प्यामबटको प्रभाव बिरूद्ध अतिरिक्त सुरक्षा ल्याउन सक्छ। स्पाम बट्सबाट बच्ने केहि तरिकाहरू समावेश:
१. ब्याजको प्लगइनहरू स्थापना गर्दै
केहि प्रयोगकर्ताहरूको लागि केहि व्यक्तिगत प्लगइनहरू स्थापना गर्न आवश्यक पर्दछ जसले उनीहरूको वेबसाइटहरूलाई स्पामबाट जोगाउन सक्दछ। उदाहरण को लागी, कस्टम स्प्याम रेफरल अवरोधक जस्तै प्लगइन प्रयोगकर्ताहरु तपाइँको ईमेल मा स्पाम पठाउन रोक्न सक्छ। बोट ब्लक जस्तो प्लगइनले केहि आलोचनात्मक रेफरल स्प्याम डोमेनहरूबाट आउने बोटहरूलाई रोक्न सक्छ
तपाईंको प्लगइनहरूको स्रोत विचार गर्न आवश्यक छ। केही प्लगइनहरूले पर्याप्त स्प्याम प्रभावको कारण तपाईंको वेबसाइटमा खराब प्रभावहरू प्रदर्शन गर्न सक्दछन्। एउटा सुरक्षित प्लगइन वर्डप्रेस ब्लक विश्लेषणात्मक स्प्याम हुन सक्छ। यस प्लगइनले यातायात अवरुद्ध गर्दछ जुन गुगल एनालिटिक्स रेफरल स्प्याम डोमेनबाट उत्पन्न हुन्छ।
२. टिप्पणी अनुभाग नियन्त्रण गर्दै
केहि सुरक्षा केसहरूमा तपाईले वर्डप्रेस स्पाम बट्सलाई ब्लक गर्नु पर्ने हुनसक्छ जुन टिप्पणी खण्डमा पर्दछ। तपाइँ तपाइँको WordPress टिप्पणीहरूमा प्रदर्शन बाट टिप्पणी बट्स प्रबन्ध गर्न प्लगइनहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। टिप्पणीहरूलाई मैन्युअल्ली नियन्त्रण गर्न, छलफल सेटिंग्समा जानुहोस्। यहाँ, तपाईं सम्पादन गर्न वा तपाईंको वेबसाइटमा टिप्पणी गर्न सक्ने व्यक्तिहरू सेट गर्न सक्षम हुन सक्नुहुन्छ।